खानपान – Health Post Nepal
मल निस्कासनको स्वभावीक आवृतिमा विलम्ब हुनु, नियमित रुपले मल त्याग गर्न नसकि बल प्रयोगगर्नुपर्ने अवस्था आउनु वा दैनिक एकपल्ट सम्म पनि कोमल दिशा गर्न नसकिएको अवस्थालाई कब्जियत भनिन्छ । विशेष रोगावस्था जस्तै आन्द्राकाघाउ, ट्यूमर, प्यारालाईसिस, मधुमेह, थाइराईडिजम पराकिनसनरोग जस्ता...
महिलाको शरीरमा थुप्रै परिवर्तन दिनहुँ जसो भइरहेको हुन्छ। बद्लिँदो खानपान र दिनचर्याले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्व पुगाइरहेको हुँदैन। महिला घर तथा परीवारको काममा निकै व्यस्त हुनेगर्छन्। जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नै गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। शरीरलाई आवश्यक पर्ने...
नास्तामा मानिसलाई चट्पटे खानेकुरा मनपर्छ। मानस आफ्नो नास्ता स्वादिस्ट होस भन्ने चाहन्छ। नास्तामा चटनीको प्रयोग गर्न अधिकांश मानिस रुचाउँछन्। हामीले टमाटर, नरिवल, भ्यान्टाको चट्नी खाएर हामी सधै बोर भएका हुनसक्छौं। हामीलाई कहिलेकाही नयाँ चटनी खान मनपर्छ। त्यसो भए हामीले...
धेरै मानिसको बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया पिउने बानी हुन्छ। तर, स्वास्थ्यका लागि यो बाँनी राम्रो होइन। तपाई पनि आफ्नो दिनको सुरुवात चियाबाट गर्नुहुन्छ भने त्यो बाँनी छोड्नुस्। खाली पेट चिया पिउँदा शरीरलाई घाटा पुग्छ। बिहान खाली पेट चिया पिउँदा...
यसरी बनाउनुस् पनिरको खीर
चामलको खीर त प्राय खाइन्छ। केही नयाँ स्वादको खीर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनिरको खीर बनाउने कोशिस गर्नुस्। पनिरको खीर बनाउन निकै सजिलो हुन्छ। र, खानमा पनि उत्तिकै स्वादिस्ट। यो बनाउन धेरै चिजको आवश्यकता पर्दैन। भान्छामा हुने सामानबाट बनाउन...
के शाकाहारी खाना साँच्चिकै स्वास्थ्यबर्द्धक हुन्छ?
पछिल्ला केही दशकयता आफ्नो खान्कीबाट मासुजन्य तथा दुग्ध पदार्थ कटौती गर्ने मानिसको संख्यामा अधिक वृद्धि आएको छ। भेगान सोसाइटीको तथ्यांक मान्ने हो भने पनि बेलायतमा मात्रै सन् २००६ देखि २०१८ सम्म शाकाहारीको संख्या चार गुणाले बढेको छ। शाकाहारी खाद्यान्नसँग...
यसकारण गाजर खाँदा शरीरलाई हुँदैन कुनै फाइदा
गाजर रुघाको लागि सुपरफुड मानिन्छ। गाजर थुप्रै प्रकारको पोषक तत्व हुन्छ। यो आँखा र मुटुका लागि निकै लाभदायक हुन्छ। यस्तै गाजरको सेवनले थुप्रै विरामी निको हुन्छन्। गाजरमा बिटा क्यारोटीन प्रसस्त मात्रामा हुन्छ। जसले शरीरमा भिटामिन ‘ए’ बनाउन सहयोग गर्छ।...
हिजो राती अधिक मदिरा सेवन गरेर कसरी घर आइपुग्नुभयो भनेर सोचमग्न हुनुहुन्छ ? वा घर आइसकेपछि कसरी आºनो ओछ्यानसम्म पुग्नुभयो भनेर घोत्लिरहनु भएको छ ? यदि यस्तो हो भने अब तपाईँले गर्ने मदिरा सेवनको मात्रालाई घटाउनुपर्ने समय आइसकेको छ...
भिटामिन ‘सी’ हाम्रो शरीरका लागि निकै महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो। यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा थुप्रै फाइदा पुर्‍याउँछ। यसमा भिटामिन ‘ई’ को जस्तै शरीरमा अन्य एन्टिअक्सिडेन्ट कार्यलाई बढाउने क्षमता हुन्छ। जो फ्री रेडिकल्सबाट हुने क्षतिलाई कम गर्छ। यसका अलावा भिटामिन ‘सी’...
शरीर स्वस्थ भएमात्र मानसिक रुपमा पनि बलियो हुन सकिन्छ। आशस्य, रोगी शरीरले कुनै पनि काम गर्न जाँगर लाग्दैन। आरोग्य, अर्थात रोगमुक्त हुनु। स्वस्थ्य रहनु शरीरको स्वभाविक अवस्था हो। रोग, विकार, कष्ट, दुख वा दुर्बलता अस्वभाविक अवस्था हो । प्रकृति...
मल पाउँदैनन् किसान, ९ अर्ब के गर्ने?
धनगढी फुलबारीका किसान सर्जन चौधरीलाई मल नपाइएला कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। मल किन्न सधैँ भौतारिरहनु पर्ने किसानलाई बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउने झन् चिन्तित बनाएको छ। चौधरी त्यस्तै एक किसान हुन् जसलाई गतवर्षहरू जस्तै मल नपाएर भौतारिनु पर्ने चिन्ता...
ड्राई फ्रुट्सको सेवनले बढ्छ, पुरुषमा शुक्रकीटको तागत : अनुसन्धान
नियमित ड्राई फ्रुटको सेवन गर्ने पुरुषमा शुक्रकीटको गुणवत्ता बढ्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । अनुसन्धाता वैज्ञानिकले भनेका छन्, ‘जुन पुरुषले १४ हप्तासम्म लगातार दुई मुठी ओखर, बदाम, काजुलगायत ड्राई फ्रुटको सेवन गर्छ, उसको शुक्रकीटको तागत बढ्छ ।’ अध्ययनका क्रममा...
तिहारमा बालरोग विशेषज्ञको सुझाब : घरमै तयार गरिएका परिकार रोजौँ
तिहारमा घरपरिवारमा जमघट हुँदा वा दिदी–बहिनीले भाइटीका लगाउँदा स–साना बालबालिकालाई मिठाइ, तयारी जुस, चकलेट आदि दिने गरिन्छ, जुन खानेकुराले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालरोग विशेषज्ञका नाताले बच्चाको हकमा आममानिसलाई निवेदन गर्न चाहन्छु– यस्ता केमिकलयुक्त मिठाइ, चकलेट,...
शाकाहारी कि मांसाहारी भोजन बढी स्वस्थकर ?
दूषित खानपान र भागदौडपूर्ण जिन्दगीका कारण मानिसमा पाचनसम्बन्धी समस्या त भइ नै रहेका छन्, साथै मानिसको प्रतिरक्षात्मक प्रणाली पनि यति कमजोर भइसकेको छ कि, शरीरमा आउने स–साना बदलावले पनि सीधै चिकित्सककहाँ पुर्याइरहेको छ । जब चिकित्सकले यस्ता मानिसमा स्वस्थ...
उचित वजन, स्वस्थ मुटु
आजको समस्या शरीरको अधिक वजन (मोटोपन) आज विश्वभरि नै ठूलो समस्याका रूपमा देखापर्न थालेको छ । खासगरी विकसित मुलुक र अन्य मुलुकमा पनि सहरी क्षेत्रमा धेरैजसो व्यक्ति यस समस्याबाट पीडित भएको देखिन्छ । यसरी वजन ज्यादा हुनुको मुख्य कारण...
सन्तुलित व्रतका अनगिन्ती फाइदा र केही सावधानी
आज हरितालिका तिज, मुलुकभरका अधिकांश हिन्दूधर्मावलम्बी महिला उपवासमा छन् । तिजको व्रत विशेषतः धार्मिक आस्थाप्रेरित छ । तर, नियमित रूपमा राखिने सन्तुलित व्रतले व्रतालुलाई अनगिन्ती स्वास्थ्यलाभ पुर्याउने तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन् । यद्यपि, व्रत राख्दा केही सावधानी...
हाम्रो समाजमा विशेषगरी हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले हरितालिका तिजमा उपवास बस्ने प्रचलन परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको छ । व्रतको अघिल्लो दिन रातिको समयमा आफन्त जम्मा भएर विशेष परिकारहरु बनाएर खाने चलन छ, जसलाई दर खाने भनिन्छ । व्रतको दिन अधिकांश हिन्दू...
डेंगुपीडितले भुलेर पनि नखानुहोस् यी ३ चिज
डेंगु निकै गम्भीर रोग हो, जसमा यदि संक्रमितले समयमा उपचार नपाएमा ज्यानै पनि जान सक्छ । वर्षातको मौसममा डेंगु संक्रामक लामखुट्टे ज्यादा विकसित हुन्छन्, किनकि, यस समयमा यत्रतत्र पानी जमेको हुन्छ । यही कारण नै यस मौसममा डेंगु रोगको...
भिटामिन बी१२ को कमीले शरीरमा दिन्छ यस्ता संकेत, शाकाहारीले कसरी पूरा गर्ने कमी ?
शरीरमा भिटामिन बी१२ को कमी सामान्यतया शाकाहारी मानिसमा बढी पाइन्छ, किनकि, निकै कम शाकाहारी आहारमा मात्र यो भिटामिन पाइन्छ । शरीरका लागि भिटामिन बी१२ अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यसले सेता रक्तकोषिकाहरूको निर्माणमा मद्दत पुर्याउँछ र स्नायुप्रणाली (नर्भ्स)लाई स्वस्थ राख्छ...
तरकारीको पोषकतत्त्व कसरी बचाउने ? खाना पकाउँदा यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस्
खाना बनाउनेवेला गरिने स–साना गल्तीले खानामा विद्यमान पोषकतत्त्व नष्ट हुन्छन् । पोषकतत्त्व नष्ट भएका खानाले तपाईंको पेट त भरिन्छ, तर स्वास्थ्य भने तन्दुरुस्त रहँदैन । यदि तपाईं तरकारीमा भएको पोषकतत्त्व खानेवेलासम्म कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने जान्नुहोस्, यी ५ भान्साका...
हामीमध्ये धेरै कुनै न कुनै प्रकारको दाँतको समस्याबाट पीडित भइरहेका हुन्छौँ । तर, ठूला असाध्य रोगबारे सजगता अपनाइरहेका हाम्रो प्राथमिकतामा दाँत स्वास्थ्य भने कमै मात्र परेको हुन्छ । दाँतका समस्यालाई सामान्य रूपमा लिएर बेवास्ता गर्दा कालान्तरमा हामीले ठूलो मूल्य...
जापानको हालसालैको अनुसन्धान भन्छ : गोलभेँडाको जुसले हृदयाघातको जोखिम घटाउँछ
गोलभेँडा नेपालमा मात्र नभई दुनियाँका धेरैजसो देशमा खाइने तरकारी हो । नेपालमा आम रूपमा तरकारीलाई ग्रेबी बनाउन परिकारमा तिखो स्वाद ल्याउन गोलभेँडाको प्रयोग गरिन्छ । टोम्याटो सस त तपाईंले पनि खुब खानुभएको होला, तर के तपाईंले टोम्याटो जुस पिउनुभएको...